यो भाँडामा नखानुस् खाना,नत्र भइएला नपुंसक |
यो भाँडामा नखानुस् खाना,नत्र भइएला नपुंसक
December 11, 2021 adminLeaveaComment on यो भाँडामा नखानुस् खाना,नत्र भइएला नपुंसक
काठमाडौँ । प्लाष्टिक हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तु हो । हरेक काममा प्लाष्टिकको प्रयोग हुने गर्छ र हामी चाहेर पनि प्लाष्टिकलाई आफ्नो जीवनबाट टाढा राख्ने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौ।चाहे बजारबाट सामान ल्याउन होस् या खाना प्याक गरेर ल्याउन होस् या चिया खान होस् हरेक काममा प्लाष्टिकको भाँडाको प्रयोग हुने गर्छ।
तर, यही प्लाष्टिक स्वास्थ्यका लागि भने अस्वस्थकर छ। प्लाष्टिकका भाडामा चिया खानु, वा प्लाष्टिकको लेपन गरिएको भाडामा खान खानुले नपुंसक हुने सम्भावना समेत रहन्छ।एक सोधका अनुसार प्लाष्टिकमा कुनै तातो वस्तु राख्दा प्लाष्टिकमा बिपिए ९विष फिनोल ए० नामको एक रसायन निस्किन्छ, जसले पुरूषलाई नपुंसक बनाउन सक्छ।
मुसामा गरिएको परिक्षणबाट यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो। यसले नपुंसक बनाउनुका साथै मष्तिष्कमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ भने हृदयघातको खतरा समेत ल्याउँछ।यस्तै, सोध अमेरिकाको अफसेट बुकमा समेत प्रकाशित भएको थियो। क्यान्सर स्पेशलिष्ट र क्यान्सर विनर्स एसोसियसनका सदस्य डा पवन गुप्ताले बताएअनुसार प्लाष्टिक जब तातो पेय तथा खानासँग सम्पर्कमा आउँछ तब बिपिए नामको रसायन निकाल्छ र यसले नपुसंक बनाउनुका साथै मुटु रोग, मष्तिष्कमा समेत प्रभाव पार्छ।
कुन भाँडामा खाना बनाउनु राम्रो ?खानेकुरामा विभिन्न पोषक तत्व हुन्छन्। तर खानेकुरा पकाउने र खाने क्रममा ती सबै पोषक तत्व हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौं। खानेकुरा पकाउने क्रममा कतिपय पोषक तत्व नष्ट हुन्छ।त्यति मात्र कहाँ हो र ? हामीले प्रयोग गर्ने कति भाँडा त यस्तो हुन्छ जसले पोषक तत्व नष्ट गर्ने मात्र होइन हानिकारक रसायन समेत पैदा गर्छ । त्यस्ता भाँडामा खानेकुरा पकाउँदा हामीलाई अनेक रोग लाग्ने गर्छ।
पित्तलको भाँडा:पित्तलको भाँडाको तापमा गुड कन्डक्टर हुन्छ । पुरानो जमानामा यसको प्रयोग धेरै हुन्थ्यो । पित्तलको भाँडामा खाना पकाउँदा र खाना खाँदा जुका पर्ने, कफ र वायुदोषको समस्या हुँदैन । यस्तो भाँडामा खाना बनाउँदा केवल सात प्रतिशत मात्र पौष्टिक तत्व नष्ट हुन्छ।पित्तलको भाँडाले एसिड र नुनसँग प्रतिक्रिया गर्छ । त्यसैले अमिलो र नुनिलो खानेकुरा यस्ता भाँडामा पकाउनु उपयुक्त हुँदैन। अन्यथा फुड पोइजनिङ हुन सक्छ।
तामाको भाँडा:केही अध्ययनमा के पाइएको छ भने खानामा पाइने अर्गानिक एसिड तामाको भाँडासँग प्रतिक्रिया हुँदा धेरै तामा पैदा गर्न सक्छ, जुन हाम्रो शरीरको लागि हानिकारक हुन्छ । यसले फुड प्वाइजनिङ गराउन सक्छ।यद्यपि तामाको भाँडामा राखिएको पानी पिउँदा विभिन्न रोगबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ । राति तामाको भाँडामा राखिएको पानी बिहान खाली पेटमा पिउँदा रक्त शुद्ध गराउँछ । स्मरण शक्ति बढाउँछ । कलेजोसम्बन्धी समस्या हट्छ।
काँस:काँस चाँदीभन्दा थोरै सस्तो हुन्छ । अतः यसको प्रयोग मध्यमवर्गीयमा अधिक हुन्छ । काँसको भाँडामा खानेकुरा पकाउँदा केवल ३ प्रतिशत मात्र पोषक तत्व नष्ट हुन्छ । साथै, खाना खानको लागि योभन्दा राम्रो अर्को धातु छैन । यसले तपाईंलाई एक होइन, अनेक फाइदा मिल्छ।काँसको थालमा खाना खाँदा रगत सफा हुनुका साथै भोक बढाउँछ । यद्यपि काँसको भाडामा अमिलो चिज राख्नु उपयुक्त हुँदैन।
माटो:माटोको भाँडा पनि प्रचलनमा छ । माटोको भाँडामा खाना खानु एकदमै राम्रो मानिन्छ । माटोको भाँडामा खानेकुराको पोषक तत्व कति पनि नष्ट हुँदैन।माटोको भाँडामा खाना पकाउँदा पोषक तत्व मिल्छ । दूध वा दूधबाट बनेको उत्पादन राख्न र खानका लागि त माटोको भाँडा सर्वोत्तम नै हो।
एक रातमा ५० जना महिलासँग से;क्स गर्ने पुरुषको लि;ङ्ग नै चोरीभएपछि…
सावधान:छिन छिनमा पिसाब लाग्ने हुन्छ भने बिल्कुलै बेवास्ता नगर्नुहोस।यस्ता दिर्घ रोग लाग्दै छ।बेलैमा यस्ता घरेलु उपचार अपनाईहाल्नुहोस
सुत्ने बेलामा पेट थिचेर सुत्ने बानी गर्नुभएको छ भने खतरामा छ हजुरको ज्यान,यस्ता समस्या आउँछ सुत्न नजाने
किड्नी खराब हुनभन्दा पहिला शरीरले दिन्छ यी ३ संकेत,भूलेर पनि नगर्नुहोस् वेवास्ता
के टिकटक ब’न्द हुन्छ त?भर्खरै सरकारले गर्यो यस्तो घोषणा,हेर्नुहोस् January 25, 2022
भिसा आएको कारण जम्मा १ लाख ८० हजारमा बुलेट बाइक बिक्री तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस January 25, 2022
सोच्नै नसक्ने गरि घ’टायो सरकारले खानापकाउने ग्या’सको भाउ हेर्नुहोस January 25, 2022
संक्रमण बारे डब्लूएचओ ले विश्वलाई दियो सुखद समाचार,विश्वमा खुसियाली January 24, 2022
खुशिको खबर्:नेपालमा आज संक्रमित घटे नयाँ को-रोना संक्रमित, संक्रमितमध्ये ८८ प्रतिशतमा ओमिक्रोन भेरियन्ट पुष्टि!(हेर्नुहाेस् विवरण सहित) January 23, 2022
लकडाउनबारे भर्खरै जारी भयो यस्तो सूचना।भाेलि १२ बजेदेखि ७७ जिल्लामै यस्तो हुने January 23, 2022
एकाएक लकडाउनको घोषणा January 23, 2022
५ मिनेटको ३ सम्म चार्ज लिन्छु! चा”हाना हुनेले सम्पर्क गर्नुस! January 23, 2022
दुबै डोज खोप लगाएका पुरूषको को’रोना सं’क्र’मणबाट मृ’त्यु January 23, 2022
यति गते सम्म देशभर ब’न्द गर्ने सर’कारको घो’षणा January 23, 2022